50 condos Dubai bixiyey for sale in Seeraar ayaa lagu soo iibsaday - Blockchain News
50 condos Dubai bixiyey for sale in Seeraar ayaa lagu soo iibsaday
50 guryaha ee Dubai lagu iibsaday isticmaalaya Seeraar. Kambayuutarada lingerie Michelle Mone iyo ninkeeda billionaire Doug Barrowman, waa labada ganacsatada ka dambeeya mashruuca UK. Markaasay waxay wada yidhaahdeen 50 ee guri ku bixiyey in Seeraar waxaa lagu iibin.
Dhismaha ayaa bilaabay goobta, oo ku yaalla Dubai ee Sayniska Park, oo waxaa la qorsheeyay in la dhamaystiro 2020.
Michelle Mone sheegay Business Insider oo halkaas joogay oo a “isku dar ah” iibsada laakiin in “badan” ku haboon lagu hafray ee Addomahaaga hore Seeraar - barnaamijyo lab dhallinyarada in t-shirts.
Mone iyo Barrowman wada hadlay iibka ee ay horumarka Dubai wareysi uu si kor loogu qaado mashruuca ay ugu dambeeyay, Equi, madal cryptocurrency ku shaqeeya maalgashi.
“Waxaan jeclahay in aan arko meel this crypto loo isticmaalo si ay u iibsadaan hantida dunida dhabta ah,” Barrowman yiri. “Taasi waa ruuxa Equi sidoo. Waxa dhaafsan meel crypto dunida jirka iyo dhab ah gelin.”
Post Previous:sarrifka Cryptocurrency BitGrail dhawaaqay muranada ka dib markii hack
Post Next:Ciyaartoyda ugu weyn ee Cryptomarket ah